लेटिसिया सिएरा। जनावरको लेखक संग साक्षात्कार वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: लेटिसिया सियराको सौजन्य।
लेटिसिया सिएरा उनी अस्तित्वमा छिन् र संसारबाट आउँछिन् पत्रकारिता, तर दिइएको छ साहित्यमा जानुहोस् एक उपन्यास संग कालो लिंग त्यसले मानिसहरूलाई कुरा गर्न लगाइरहेको छ। यो छ पशु। यसमा साक्षात्कार उसले हामीलाई यसको बारेमा र अन्य धेरै विषयमा बताउँछ। म तपाईंको दया र समयको ठूलो मूल्यांकन गर्दछु समर्पित
लेटिसिया सियरा - अन्तर्वार्ता
लाटिसिया साइरा: मैले पढेका पहिलो उपन्यासहरू किशोर थिए: रोमांचक एस्तर y पाँच। पहिलो "वयस्क" उपन्यास मलाई यो ठीकसँग याद थिएन तर यो केहि शीर्षक हो भनेर म कल्पना गर्छु अगाथा क्रिस्टी वा को भिक्टोरिया होल्ट.
मैले लेखेको पहिलो कथा यो छ वा सात वर्ष पुरानो थियो र यो थियो कथारेखाचित्रको साथ र मैले आफैं धागोमा सिल लगाएँ जुन यो किताबको पसलमा देखेको जस्तै देखिन्थ्यो।
SL: एक भविष्यवाणी भविष्यवाणी को एक क्रॉनिकल, गेब्रिएल गार्सिया मार्क्जेजद्वारा किनभने उनी इतिहासमा सब भन्दा बढि बताइएको बिफलकर्ता हुन्। मैले यो अद्भुत, स्तब्धकारी, क्रूर पाएँ।
LS: गेब्रियल गार्सिया मार्किज, इसाबेल Allende, लरेन्स सिल्वा, एनी पेरी, पीडी जेम्स, अगाथा क्रिस्टी, मेरी हिगिन्स क्लार्क, डोलोरेस राउन्ड, स्ट्रेचर लकबर्ग... र म गणना गर्न जारी राख्छु।
AL: हामी तपाईंको उपन्यासमा के पाउँछौं, पशु?
SL: पशु यो एक अपराध उपन्यास हो जुनमा म बनाउँछु हाम्रो नैतिक सीमा कहाँ छ भनेर प्रतिबिम्बित। पाठकले सोच्दछ कि उसले कतिपय परिस्थिति वा परिस्थितिमा कति टाढा जान सक्छ, यदि उसले त्यो असल रेखा पार गर्दछ जसले मानिसलाई पशु र पशुबाट फरक पार्छ।
के हामी मार्न सक्षम छौं? परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, म विश्वस्त छु कि हो, हामी बोल्ने लाइन पार गर्न हामी सबै सक्षम छौं, त्यो लाइन जसले मानिसलाई जनावरबाट अलग गर्दछ। र थोरै हदसम्म, दिन प्रति दिनको आधारमा, यो हामीले सोचेभन्दा बढी सामान्य छ कि हामी हाम्रो पशुहरूको टाउको देखा पर्न दिन्छौं। हाम्रोलागि अपमान वा खुशीयालीको सहारा लिनको लागि राम्रो विहानको भन्दा सजिलो छ, कृपया एक धन्यवाद वा धन्यवाद। हामी यस्तो समाजमा बस्छौं जहाँ राम्रो भन्दा नराम्रो हुनु सजिलो छ। र, अझ खराब भनेको के हो भने, कहिलेकाँही यसलाई राम्रोसँग हेरिएको हुन्छ र मानकित पनि छ। यसले हामीलाई कम र कम आश्चर्यचकित गर्दछ र त्यो छ, कम्तिमा भन्नु, चिन्ताजनक, खतरनाक भन्नु हुँदैन।
कोहामी धेरै असुरक्षित छौं र हिंसाको लागि धेरै प्रवण छौं भन्ने महसुस गर्दै, कि त मौखिक वा शारीरिक उपन्यासको अक्ष हो। र म त्यो प्रतिबिम्ब पाठकको दिमागमा राख्न चाहन्छु ताकि पुस्तकको अन्त्यमा उनले मेरो दृष्टिकोणमा समानुभूति पाएको अनुभव गरे।
र यसका लागि, भित्र पशु को अस्टुरियसको सानो र शान्त शहरमा एउटा जघन्य अपराधको अनुसन्धान, तर अनुसन्धान विकसित भयो दुई तरिकामा: प्रहरी र पत्रकारहरू। एक स्थानीय पत्रकारलाई अभिनय गर्दै राष्ट्रिय पुलिसको होमिड समूहको एक इन्स्पेक्टर, र पत्रकारलाई अभिनय गर्ने पुलिस अधिकारी। पहिलो, अनुसन्धानको कडा लाइन र पुलिस र न्यायिक प्रक्रियाहरूद्वारा धेरै प्रतिबन्धित। दोस्रो, असीमित रूपमा अधिक लचिलो र पुलिस भन्दा कम साधनको साथ, तर यसले परिणाम र केसको बारेमा सुरागहरू पनि हासिल गर्छ। दुबै लाइनहरू तिनीहरूले सुराग दिदैछन् के भयो, यो कसरी भयो, किन यो भयो र कार्यान्वयन गर्ने हात को थियो भनेर पाठक।
AL: तपाइँ कुन साहित्यिक चरित्र भेट्न र सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ?
LS: ए हरक्युल पोइरोट। उहाँ मलाई एक सौन्दर्य हिंस्रक चरित्र लाग्छ, मनोवैज्ञानिक धेरै चाखलाग्दो र पूर्णतया कालातीत।
SL: लेख्न मलाई एम्बियन्ट आवाज चाहिन्छ: टेलिभिजन खुला छ, मान्छे कुरा गर्दैछन् र यदि यो झगडा भइरहेको छ भने राम्रो, हल्ला, हल्ला। चुपचापले मलाई धेरै र एकाकीपनलाई पनि छल गर्दछ। म वरपरका मानिसहरूलाई ध्यान दिन चाहन्छु। यसैले मलाई अफिसमा लेख्नको लागि धेरै गाह्रो छ। मलाई लेख्न मन पर्छ कक्षाकोठामा, मेरो पतिको र मेरो छोरीको छेउमा र, सम्भव भए, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा मैले यस उपन्यासको केही अंश क्याफेटेरियामा लेखेको थिएँ जब म मेरी छोरीले अंग्रेजी कक्षाबाट बाहिर निस्किरहेको थिएँ।
बरु, पढ्न म निरपेक्ष मौन हुनु पर्छ। म पृष्ठभूमिमा वा टिभीमा संगीतको साथ पढ्न सक्दिन। त्यसैले पढ्न मेरो मनपर्ने समय रात र ओछ्यानमा छ। म त्यो अनौंठो हुँ।
SL: म कुनै पनि समयमा लेख्छु। अब जुन म घर छु, कुनै पनि समयमा। सामान्यतया बिहान। जब उहाँ काम गर्नुहुन्छ, जब उहाँ कामबाट घर आउनुभयो र त्यो दिउँसो सातदेखि रातको १० वा एघारसम्म थियो। हरेक दिन र जस्तो मैले तपाईंलाई पहिले भनिसकें, मेरो मनपर्ने ठाउँ बैठक कोठा हो।
म रातको लागि पढ्न आरक्षित गर्छु, तेर्सो रूपमा वा के समान छ, ओछ्यानमा र पूर्ण मौनतामा।
SL: मेरो पेन्डिंग विषय कविता हो। म यो बुझ्न सक्दिन र मलाई मन परेको कविता धेरै छ, तर आफ्नै अज्ञानताको कारण।
मलाई यो मन पर्छ थिएटरविशेष गरी त्यो अलेजान्ड्रो कास्ना। र ऐतिहासिक उपन्यास यसले मेरो ध्यान पनि समात्यो। थप रूपमा, यो एक विधा हो जसको लागि उनी पुलिस विधाप्रति अवफादार हुनेछन्।
LS: म एक अस्थायी लेखक पढ्दै छु: एलिसिया जी। गार्सिया र उनको अपराध उपन्यास जेल। केही टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको छलकपट र झूटको एक ठूलो आलोचना र हामी कत्ति घृणित छौं वा दर्शकहरू छन्। अत्यधिक सिफारिश गरिएको।
SL: म प्रकाशन संसारमा नयाँ हुँ। यो मेरो पहिलो उपन्यास हो, त्यसैले म तपाईंलाई के भन्ने भनेर वास्तवमा थाहा छैन। तर मँ डराउँछु कि अधिक लेखिएको छ, पढिएको भन्दा बढि लेखिएको छ, ताकि लेखक जहिले पनि सस्तोमा पर्ने छ। के हो म ती सबै लेखकहरूलाई भन्छु जसले उनीहरूलाई प्रकाशित गर्न कोशिस गर्दैछन् कि तिनीहरू प्रयास गर्न छाड्दैनन् कि उनीहरू तौलियामा फाल्दैनन्, कि उनीहरू हस्तलिपि पठाउन जारी राख्छन्, कि तिनीहरू दृढ, स्थिर, जिद्दी र तिनीहरू आफैंमा र उनीहरूको काममा धेरै विश्वास गर्छन्। तपाईलाई कहिले थाहा हुँदैन।
LS: त्यस समयमा तपाईले सोचेका थिए कि मे २०२० को लागि तयार गरिएको उपन्यासको सुरूवात जनवरी २०२१ सम्म स्थगित गर्नुपर्नेछ। र अब पाठकसँगको सम्पर्क हराइरहेको छ, किनभने प्रस्तुतिकरणहरू छन् लाइन मा, तपाईं सायद बैठकहरू वा आमने-सामने हस्ताक्षरहरू व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ।
मलाई लाग्छ कि यो महामारीको स्थिति हामीलाई थोरै सकारात्मक छोड्छ। त्यहाँ धेरै मृत्युहरू छन्, धेरै परिवारहरू एक बर्षको लागि छुट्टिएका छन् र सबै धेरै सकारात्मक पठनहरू पाउनको बावजूद धेरै दिमाग नभएको जोकर। थोरै बेकार छ मलाई लाग्छ कि यस्तो अवस्था जुन घरको धेरै समय खर्च गर्नु बाहेक अरू विकल्प नै हुँदैन र थप पढिएको छ कसै-कसैले यो पत्ता लगाए कि पढाइ रमाईलो छ। र त्यो धेरै सकारात्मक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » लेटिसिया सिएरा। पशुको लेखकसँग अन्तर्वार्ता